Azokwenyuka ngo-20% amanani amaqanda ngenxa yomkhuhlane wezinkukhu | isiZulu
Azokwenyuka ngo-20% amanani amaqanda ngenxa yomkhuhlane wezinkukhu
Izakhamuzi zakuleli zehlukene phakathi ngesipesheli sakwaSpur
U-Eskom usufake isicelo sokunyusa amanani kagesi ngo-19.9%
Iswine flu flu ibulale abangu-12
Johannesburg – Kulindeleke ukuba amanani amaqanda anyuke ngesilinganiso esiphakathi kuka-15% kuya ku-20% njengoba abakhiqizi kumele bapheshe izindleko zomkhiqizo omncane ngenxa yokubheduka kwe-Avian flu, kusho umhlaziyi.
Esitatimendeni kuleli sonto uPaul Makube, ongusomnotho ophezulu wezolimi e-FNB Business uthe lo mkhuhlane wezinyoni okhona ube nomthelela ongemuhle kumanani amaqanda.
Ngasekuqaleni kwalo nyaka, abakhiqizi baxwayisa ngokuthi ukwentuleka kwemikhiqizo ephuma ezinkukhwini kuzodala ukuthi kunyuke amanani.
Abakhiqizi bayaphoqeleka ukuthi bahlinze izinkukhu ngenxa yokubalekela ukuthi zingenwe yilo mkhuhlane. Ebhekise ezibalweni zeSouth African Poultry Association (SAPA), uMakube uthe kulo nyaka lehle ngo-12% izinga lokukhiqizwa kwamaqanada.
OLUNYE UDABA: Kuvalwe ipulazi lamaqanda eGauteng ngenxa yomkhuhlane wezinyoni
Embikweni wango-Agasti 2017 owakhishwa yi-SAPA kuvele ukuthi amanani amaqanda enyuke ngo-1.9% kusukela ngoJulayi nonyaka.
"Ukunyuka kwamanani amaqanda kungenxa yalo mkhuhlane wezinyoni okhona," kuchaza uMakube.
Izibalo zeStatistics South Africa (StatsSA) zitshengisa ukuthi ngo-Okthoba amaqanda abesenyuke ngo-8.5% uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo ngonyaka owedlule.
Ube esexwayisa ngokuthi kulindeleke ukuthi amanani amaqanda enyuke ngesilinganiso engafinyelela ku-20% kulezi zinyanga ezimbalwa ezizayo.
Ushonile owesilisa ozame ukuzibulala ngemuva kokuphonsa phansi ingane
Cpt: 12-20°C Pta: 15-24°C
Jhb: 11-22°C Bloem: 7-22°C
Dbn: 19-25°C PE: 12-22°C
Cape Town - 11:03:59 AM VEHICLE FIRE before the M5 Ezinye zasemigwaqeni